Canshuuraha Uumeynta Jumlada ee Mareykanka iyo Daafaha Dunida iyo soo saarayaasha | SIGAAR
Ku saabsan QIIRO
Sirta Dhadhanka Weyn
Dib u eegista Warbaahinta
DAREEN gudaha Barnaamijka
Wada-hawlgalayaasha Istiraatiijiga ah
Dib u eegis Xirfad leh
Canshuuraha Vaping ee Mareykanka iyo Adduunka oo dhan
Maaddaama qiiqu ku sii kordhayo caan, waxay u noqotey bartilmaameed dabiici ah dawladaha u baahan dakhliga canshuuraha. Sababtoo ah alaabada uumiga waxaa sida caadiga ah iibsada dadka caba sigaarka iyo sigaar cabayaashii hore, maamulka canshuuraha ayaa si sax ah u qaadanaya in lacagta ku baxday sigaarka elektaroonigga ay tahay lacag aan lagu isticmaalin soosaarka tubaakada ee soo jireenka ah. Dowladuhu waxay ku tiirsanaayeen sigaarka iyo waxyaabaha kale ee tubaakada ka soo baxa oo ah il dhaqaale muddo tobanaan sano ah.
Hadday aalado uumiga iyo dareeraha elektaroonigga ahi u qalmaan in loo canshuuro sida tubaakada oo kale waxay ku dhow dahay barta. Dowladaha ayaa u arka iyaga oo sigaar cabayaasha ka riixaya tubaakada, waxayna fahmeen in dakhliga lumay ay tahay in la sameeyo. Maadaama uumiga u muuqdo sida sigaar cabista, oo ay jirto diidmo la taaban karo oo caafimaadka bulshada ah oo ku saabsan faasiqnimada, waxay noqoneysaa bartilmaameed soo jiidasho leh oo loogu talagalay siyaasiyiinta, gaar ahaan maxaa yeelay waxay qiil ka dhigan karaan canshuurta iyadoo la adeegsanayo sheegashooyin caafimaad oo kala duwan
Canshuuraha Vape ayaa hada la soo jeediyay oo si joogto ah loogu gudbiyaa Mareykanka iyo meelo kale. Canshuuraha waxaa sida caadiga ah ka soo horjeeda u doodayaasha yareynta waxyeellada tubaakada iyo wakiilo ka socda kooxaha ganacsiga warshadaha oo uumiga ka baxa iyo macaamiisha qiiqaya, waxaana badanaa taageera ururada kantaroolka tubaakada sida ururada sambabaha iyo sambabaha.
Maxay dawladuhu u cashuuraan wax soo saarka uumiga?
Canshuuraha alaabooyinka gaarka ah - oo badanaa loo yaqaan 'excise cashuuraha' - waxaa loo adeegsadaa sababo kala duwan: in lacag loo aruuriyo hay'adda canshuuraha, in wax laga beddelo habdhaqanka kuwa la canshuurayo, iyo in la dheellitiro kharashaadka deegaanka, caafimaadka, iyo kaabayaasha dhaqaale ee ay abuureen isticmaalka badeecadaha. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah canshuurta khamriga si loo joojiyo cabitaanka badan, iyo canshuurta shidaalka si loogu bixiyo dayactirka waddooyinka.
Wax soo saarka tubaakada ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa canshuuraha badeecadaha. Sababtoo ah waxyeelada sigaarka ayaa bulshada oo dhan (daryeelka caafimaadka ee sigaar cabayaasha) ku bixisa kharashyo, taageerayaasha canshuuraha tubaakada ayaa sheegaya in macaamiisha tubaakada ay tahay inay biilka saaraan. Mararka qaar canshuuraha laga qaado khamriga ama tubaakada waxaa loogu yeeraa canshuuraha dembiga, maxaa yeelay waxay sidoo kale ciqaabaan habdhaqanka kuwa cabba iyo kuwa sigaarka caba - waxayna aragti ahaan ka caawisaa ka dhaadhicinta dembiilayaasha inay ka baxaan jidadkooda xun.
Laakiin maxaa yeelay dowladdu waxay ku tiirsan tahay dakhliga, haddii sigaar cabbistu yaraato waxaa jira hoos u dhac maaliyadeed oo ay tahay in lagu sameeyo ilo kale oo dakhli, ama haddii kale ay dowladdu yareynayso kharashka. Dowladaha badankood, canshuuraha sigaarka waa ilo dakhli oo muhiim ah, canshuurta laga qaado waxaa lagu daraa marka lagu daro canshuurta iibka ee caadiga ah ee lagu qiimeeyo dhammaan alaabada la iibiyay.
Haddii shey cusubi uu la tartamo sigaarka, sharci-dajiyayaal badan ayaa si xamaasad leh u doonaya inay si isku mid ah u canshuuraan badeecada cusub si ay uga dhigaan dakhliga lumay. Laakiin ka waran haddii sheyga cusub (aan ugu yeerno e-sigaarka) laga yaabo inuu yareeyo waxyeelada sigaarka iyo kharashyada caafimaad ee la xiriira? Taasi waxay uga dhigeysaa sharci dejiyeyaasha xaalad jahwareer ah-ugu yaraan kuwa ku mashquulsan barashadeeda haba yaraatee.
Badanaa sharci-dajiyayaasha gobolku waxay udhaxeeyaan inta udhaxeysa taageerida ganacsiyada maxalliga ah sida dukaamada vape (oo aan rabin canshuur) iyo u ololeynaya u ololeeyayaasha kooxaha ixtiraamka leh sida Ururka Kansarka Mareykanka iyo Ururka Sambabka Mareykanka (oo si joogto ah u taageera canshuuraha badeecooyinka uumiga). Mararka qaarkood qodobka go'aan qaadashada ayaa ah macluumaad khaldan oo ku saabsan waxyeelooyinka la filayo ee uumiga. Laakiin mararka qaarkood runti waxay u baahan yihiin oo keliya lacagta.
Sidee cashuurta vape u shaqeeyaan? Meel walba miyay isku mid yihiin?
Inta badan macaamiisha Mareykanka waxay bixiyaan canshuurta iibka ee gobolka ee ku saabsan badeecooyinka qulqulaya ee ay iibsadaan, sidaa darteed dowladaha gobolka (iyo mararka qaar maxalliga ah) dowladaha horayba waxay uga faa'iideystaan ​​iibka xitaa xitaa ka hor inta aan lagu darin canshuuraha. Canshuuraha iibka waxaa badanaa lagu qiimeeyaa boqolkiiba boqolkiiba tafaariiqda alaabada la iibsanayo. Wadamo badan oo kale, macaamiisha waxay bixiyaan "canshuur qiimo leh" (VAT) oo u shaqeysa si la mid ah canshuurta iibka. Canshuuraha badeecadaha, waxay ku yimaadaan dhowr nooc oo aasaasi ah:
Canshuurta tafaariiqda ee dareeraha elektarooniga ah - Tan waxaa lagu qiimeyn karaa oo keliya dareeraha ay nikotiintu ku jirto (marka asal ahaan waa canshuurta nikotiinka), ama dhammaan e-dareeraha. Maaddaama sida caadiga ah lagu qiimeeyo halkii mililitir, canshuurta noocan ah ee elektaroonigga ahi waxay saamaynaysaa iibiyaasha dareeraha elektaroonigga ah ee dhalada ka badan marka loo eego tafaariiqleyda alaabooyinka dhammaaday oo ay ku jiraan qaddar yar oo elektaroonig ah ah (sida vapes iyo cigalikes). Tusaale ahaan, JUUL iibsadayaashu waxay kaliya ku bixin doonaan cashuurta 0.7 mL ee dareeraha elektaroonigga ah dushiisa kasta (ama kaliya 3 mL halkii xirmo ee jiq ah). Sababtoo ah badeecada qiiqa warshadaha tubaakada ayaa ah aalado yar yar oo salka ku haya ama sigalikes, u ololeeyayaasha tubaakada ayaa inta badan ku riixa canshuuraha halkii mililitir
Canshuurta jumlada - Noocan canshuurta sigaarka elektaroonigga ah waxaa si macquul ah u bixiya jumladlaha (qeybiyaha) ama dukaanka gobolka, laakiin qiimaha marwalba waxaa loo gudbiyaa macaamilka qaab qiime sare leh. Canshuurta noocan ah waxaa lagu qiimeeyaa qiimaha badeecada tafaariiqleyda laga qaado markay wax ka iibinayaan jumladaha. Badanaa gobolku wuxuu u kala saaraa uumiga sida waxyaabaha tubaakada ka soo baxa (ama "waxyaabaha kale ee tubaakada," oo waliba ay ku jiraan tubaakada aan qiiqa lahayn) iyada oo ujeedadu tahay qiimeynta cashuurta. Canshuurta jumlada waxaa lagu qiimeyn karaa oo keliya alaabooyinka ay ka kooban tahay nikotiintu, ama waxaa laga yaabaa in lagu dabaqo dhammaan e-dareeraha, ama dhammaan alaabooyinka ay ku jiraan aaladaha aan ku jirin e-dareeraha. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah California iyo Pennsylvania Canshuurta vape ee California waa canshuur jumlo ah oo sanadle ay dejiso gobolka waxayna u dhigantaa heerka isku darka dhammaan canshuuraha sigaarka. Waxay khuseysaa oo keliya alaabada ay ku jiraan nikotiintu. Canshuurta 'vape' ee loo yaqaan 'Pennsylvania vape' waxay asal ahaan ka muuqatay dhammaan alaabooyinka, oo ay ku jiraan aaladaha iyo xitaa qalabyada aan ku jirin e-dareere ama nikotiin, laakiin maxkamad ayaa xukuntay 2018 in gobolku uusan qaadi karin canshuurta aaladaha aan ku jirin nikotiinta.
Mararka qaar canshuuraha badeecadahaas waxaa la socda “canshuurta dhulka,” taas oo u oggolaanaysa gobolka inay cashuur ka soo qaado dhammaan badeecadaha ay dukaanku leeyihiin ama jumladleydu gacanta ku hayso maalinta ay canshuurtu dhaqan galayso. Caadi ahaan, tafaariiqle ayaa sameeya liiska maalintaas wuxuuna u qoraa jeeg gobolka qadarka buuxa. Haddii bakhaarka Pennsylvania uu haysto alaab qiimaheedu dhan yahay $ 50,000 oo taallay agabka, milkiilaha ayaa mas'uul ka noqon lahaa in isla markiiba $ 20,000 la siiyo gobolka. Ganacsiyada yar yar ee aan gacanta ku hayn lacag kaash badan, cashuurta dhulka hoostiisa lafteeda ayaa naf-goojis ah. Canshuurta PA vape waxay in ka badan 100 dukaan vape ah ka saartay ganacsi sanadkii ugu horreeyay.
Canshuuraha oo laga jaro Mareykanka
Ma jiro canshuur federaal ah oo laga qaado badeecooyinka uumiga. Biilasha waxaa lagu soo bandhigay Congress-ka si loo canshuuro canshuuraha, laakiin midkoodna ma uusan u codeyn midkoodna Golaha buuxa ama Golaha Guurtida wali.
Gobolka Mareykanka, dhulka, iyo canshuuraha maxalliga ah
Kahor 2019, sagaal gobol iyo Degmada Columbia ayaa canshuuray alaabada uumiga. Tiradaasi waxay ka badan tahay labanlaab toddobadii bilood ee ugu horreysay sannadka 2019, markii argagaxa anshaxa ee ku aaddan JUUL iyo qaangaadhnimada dhallinta ee qabsaday cinwaannada cinwaannada ku dhowaad maalin kasta muddo sannad ka badan ay ku riixday sharci-dajiyayaasha inay wax ka qabtaan "joojinta cudurrada faafa."
Xilligan, kalabar gobollada Mareykanka waxay leeyihiin nooc ka mid ah canshuurta wax soo saarka gobolka oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, magaalooyinka iyo gobollada gobollada qaarkood waxay leeyihiin canshuurahooda u gaarka ah, sida Degmada Columbia iyo Puerto Rico.
In kasta oo Alaska aysan lahayn canshuur gobol, meelaha degmooyinka qaarkood waxay leeyihiin canshuuro u gaar ah:
Juneau Borough, NW Arctic Borough iyo Petersburg waxay leeyihiin 45% canshuur jumlo isku mid ah alaabooyinka nikotiinta kujirta
Matanuska-Susitna Borough waxay leedahay 55% canshuur jumlo ah
Canshuurta Kaalifoorniya ee "alaabada kale ee tubaakada" waxaa dejiyaa sanadkiiba Gudiga gobolka ee Sinnaanta. Waxay muraayad u tahay boqolleyda dhammaan canshuuraha lagu qiimeeyo sigaarka. Asal ahaan tan waxay u dhigneyd 27% qiimaha jumlada, laakiin ka dib Soo-jeedinta 56 waxay kordhisay canshuurta sigaarka min $ 0.87 ilaa $ 2.87 baako, canshuurta vape si aad ah ayey u kordhay. Sannadka bilaabmaya 1-da Luulyo, 2020, cashuurtu waa 56.93% qiimaha jumlada ee dhammaan alaabada ay ku jirto nikotiintu
Gobolku wuxuu leeyahay cashuur laba jibbaaran, oo lagu qiimeeyo $ 0.40 halkii mililitir e-dareere ee alaabada nidaamka xidhan (jiingadaha, kartoonada, cigalikes), iyo 10% jumlada alaabooyinka nidaamka furan, oo ay kujiraan dhalada elektarooniga ah iyo aaladaha
$ 0.05 halkii mililitir cashuurta ku jirta nikotiinta ay ku jirto e-dareere
Raasamaalka qaranku wuxuu u kala saaraa faaruqinta "waxsoosaarka kale ee tubaakada," wuxuuna qiimeeyaa canshuuraha qiimaha jumlada iyadoo lagu saleynayo sicirka lagu iibiyo qiimaha jumlada sigaarka. Sanadka maaliyadeed ee hadda socda, oo ku eg Sebtember 2020, cashuurta waxaa loo dejiyey 91% qiimaha jumlada ee qalabka iyo nikotiinta ku jirta e-dareeraha
Canshuurta elektaroonigga ah ee $ 0.05 halkii mililitir ee alaabta nidaamka xiran (jiingado, kartoonno, cigalikes), iyo 7% canshuur jumlo ah oo ku saabsan qalabka nidaamka furan iyo dheecaanka elektroonikada ee dhalada ah ayaa dhaqan galaya Janaayo 1, 2021
15% canshuurta jumlada ah ee dhammaan alaabada uumiga. Marka lagu daro canshuurta gobolka oo dhan, labadaba Cook County iyo magaalada Chicago (oo ku taal Cook County) waxay leeyihiin canshuur u gaar ah:
Chicago waxay qiimeysaa $ 0.80 halkii cashuur dhalada ah ee dareeraha nikotiinta kujirta iyo waliba $ 0.55 mililitirkiiba. (Chicago uumiyeyaashu waa inay sidoo kale bixiyaan $ 0.20 halkii mL canshuurta degmada Cook.) Canshuuraha xad dhaafka ah awgeed, dukaamo badan oo ku yaal Chicago waxay iibiyaan e-dareere eber-nikotiin ah iyo tallaalada DIY nikotiinka si looga fogaado canshuurta halkii-mL ee sare dhalooyinka
Degmada Cook waxay canshuuraysaa alaabada ay ku jirto nikotiinka $ 0.20 halkii mililitir
$ 0.05 halkii mililitir cashuur dhan e-dareere ah, nikotiin ha lahaado ama ha lahaado
Canshuur 15% jumlo ah oo ku jirta aaladaha elektaroonigga ah iyo nidaamka furfuran, iyo $ 1.50 halkii cashuur oo ku saabsan boodhadhka iyo kaydadka hore loo sii buuxiyay
Canshuur jumlo ah 43% ah dhammaan alaabada uumiga
Ma jiraan wax canshuur ah oo laga qaado gobolka oo dhan Maryland, laakiin hal degmo ayaa leh canshuur:
Degmada Montgomery waxay ku soo rogtaa 30% canshuur jumlo ah dhammaan alaabada uumiga, oo ay ku jiraan aaladaha lagu iibiyo dareere la'aan
Canshuur jumlo ah 75% ah dhammaan alaabada uumiga. Sharcigu wuxuu ka doonayaa macaamisha inay soo saaraan caddeyn ah in alaabadooda uumiga la canshuuray, ama ay ku xiran yihiin qabasho iyo ganaax $ 5,000 dambiga ugu horreeya, iyo $ 25,000 dembiyada dheeraadka ah
Sannadkii 2011-kii Minnesota ayaa noqotay gobolkii ugu horreeyay ee canshuur ku soo roga sigaarka elektaroonigga ah. Canshuurtu markii hore waxay ahayd 70% qiimaha jumlada, laakiin waxaa lagu kordhiyay 2013 ilaa 95% ee jumlada alaab kasta oo ay kujirto nikotiinta. Cigalikes iyo pod vapap-iyo xitaa xirmooyinka bilowga ah oo ay ku jiraan dhalo dareere e-dareere ah ayaa lagu canshuuraa boqolkiiba 95% qiimahooda jumlada oo dhan, laakiin e-dareeraha dhalada ku jira oo keliya nikotiinka laftiisa ayaa la canshuuraa.
30% canshuurta jumlada ah ee dhammaan alaabada uumiga
Canshuurta jumlada ah ee 8% ee alaabooyinka uumiga nidaamka furan, iyo $ 0.30 halkii mililitir ee alaabada nidaamka xiran (jiingadaha, kartoonada, sigaarka)
New Jersey waxay cashuurta elektaroonigga ah ku shubtaa $ 0.10 halkii mililitir ee badeecadaha iyo kaydadka ku saleysan, 10% qiimaha tafaariiqda ee e-dareeraha dhalada ku jira, iyo 30% jumlada qalabka. Sharci dejiyeyaasha New Jersey waxay u codeeyeen Janaayo 2020 inay si dhab ah u laba jibbaaraan canshuurta elektaroonigga ah ee laba-heer ah, laakiin sharciga cusub waxaa diidey guddoomiyaha gobolka Phil Murphy
New Mexico waxay leedahay cashuur e-dareere ah oo laba-jibbaaran: 12.5% ​​jumlo ah oo ku jira dareeraha dhalada ku jira, iyo $ 0.50 midkiiba, kaydadka, ama sigaarka oo leh awood ka yar 5 mililitir
Canshuur tafaariiqeed ah 20% dhammaan alaabada uumiga
A $ 0.10 halkii mililitir cashuurta ku jirta nikotiinta ay ku jirto e-dareere
Malaha canshuuraha ugu caansan ee laga bixiyo dalka waa canshuurta jumlada ah ee Pennsylvania ee 40%. Markii hore waxaa lagu qiimeyn jiray dhammaan badeecooyinka uumiga, laakiin maxkamad ayaa xukuntay 2018 in canshuurta lagu dabaqi karo oo keliya dareeraha elektarooniga ah iyo aaladaha ay ku jiraan e-dareeraha. Canshuuraha uumiga ee PA ayaa xiray in ka badan 100 ganacsiyada yaryar ee gobolka ah sanadka ugu horreeya ka dib markii la ansixiyay
Canshuurta elektaroonigga ah $ 0.05 halkii mililitir iyo $ 3.00 halkii canshuur ee sigaarka elektarooniga ah
Canshuurta jumlada ah ee 56% ee elektiroonigga ah iyo qalabka horay loo sii buuxiyey
Canshuurta jumlada ah ee 92% ah e-dareeraha iyo aaladaha — canshuurta ugu sareysa ee dowlad kasta soo rogto
$ 0.066 halkii mililitir cashuurta ku jirta nikotiinta ay ku jirto e-dareere
Gobolku wuxuu dhaafay canshuurta tafaariiqda elektaroonigga ah ee laba-heer ah sannadka 2019. Waxay ku dalacdaa iibsadayaasha $ 0.27 halkii mililitir e-juice-ka ama aan lahayn nikootiin-boodhadhka iyo gulufyada ka yar cabirka 5 mL, iyo $ 0.09 halkii mililitir ee dareeraha ku jira weelasha ka weyn 5 milimitir
$ 0.075 halkii mililitir cashuur dhan e-dareere ah, ama nikotiin ha lahaado ama ha lahaado
A $ 0.05 halkii mililitir cashuurta e-dareere ee alaabada nidaamka xidhan (jiingadaha, kartoonada, cigalikes) kaliya-leh ama nikotiin la'aan
15% canshuurta jumlada ah ee dhammaan alaabada uumiga
Canshuuraha Vape ee adduunka
Sida Maraykanka oo kale, sharci dejiyeyaasha adduunka oo dhami runti ma fahmaan waxyaalaha uumiga weli. Alaabooyinka cusubi waxay u muuqdaan sharci-dajiyayaasha sida hanjabaadda dakhliga canshuuraha sigaarka (oo run ahaantii ay yihiin), sidaa darteed dareenka haddii had iyo jeer lagu soo rogo canshuuro sare iyo rajo wanaag.
Canshuuraha caalamiga ah
10 leke ($ 0.091 US) halkii mililitir cashuur ahaan e-dareere ay ku jirto nikotiintu
20 manat ($ 11.60 US) halkii cashuur litirkiiba (qiyaastii $ 0.01 mililitirkiiba) dhammaan e-dareere
Canshuurtu waa 100% qiimaha canshuurta kahor ee e-dareere ay kujirto nikotiinta. Taasi waxay u dhigantaa 50% qiimaha tafaariiqda. Ujeedada canshuurtu ma cadda, maxaa yeelay firaaqooyinka ayaa loo malaynayaa in laga mamnuucay waddanka
In kasta oo Croatia ay ku leedahay cashuurta elektaroonigga ah buugaagta, haddana waxaa laga dhigay eber
A 12 0.12 ($ 0.14 US) canshuurtii mililitir dhammaan e-dareeraha
Baarlamaanka deenishka ayaa meel mariyay lacag dhan 2.00 kr ($ 0.30 US) canshuurta mililitirkiiba, taas oo dhaqan gali doonta sanadka 2022. Dadka u ololeeya faquuqida iyo yareynta waxyeelada ayaa ka shaqeynaya sidii loo badali lahaa sharciga
Bishii Juun 2020, Estonia waxay hakisay canshuurtii ku jirtay e-dareeraha muddo labo sano ah. Waddanku wuxuu horey ugu soo rogay tax 0.20 ($ 0.23 US) halkii mililitir cashuur dhan e-dareere
A 30 0.30 ($ 0.34 US) halkii mililitir cashuur dhan-dareere ah
A 10 0.10 ($ 0.11 US) halkii cashuur mililitir dhammaan e-dareeraha
A HUF 20 ($ 0.07 US) halkii mililitir cashuur dhan e-dareeraha
Canshuurta Indooniisiyadu waa 57% qiimaha tafaariiqda, waxayna umuuqataa kaliya in loola jeedo nikotiin ay kujiraan e-dareere ("soosaarida iyo nuxurka tubaakada" waa ereyga). Saraakiisha dalka waxay umuuqdaan kuwa doorbidaya in muwaadiniinta ay sigaarka cabaan
Ka dib sanado badan oo uu macaamiisha ku ciqaabayay canshuur ka dhigaysa mid u kacaya laba jibbaar sida sigaar cabista, baarlamaanka talyaanigu wuxuu ansixiyay cashuur cusub oo ka hooseysa e-dareeraha dabayaaqadii 2018. Canshuurta cusubi waxay 80-90% ka hooseysaa tii hore. Canshuurtu hadda waxay gaaraysaa € 0.08 ($ 0.09 US) halkii mililitir ee nikotiinta ay ku jirto e-dareeraha, iyo € 0.04 ($ 0.05 US) ee alaabada nikotiinka eber-ka ah. Uumiga Talyaani ee doorta inuu sameeyo dareerahiisa elektarooniga ah, PG, VG, iyo dhadhanka lama cashuuro
Qalabka iyo nikotiinta ay ku jirto e-dareeraha waxaa lagu canshuuraa 200% qiimaha CIF (qiimaha, caymiska iyo xamuulka)
In kasta oo Kazakhstan ay ku leedahay canshuurta elektaroonigga ah buugaagta, haddana waxaa laga dhigay eber
Canshuuraha Kenya, oo la hirgaliyay 2015, ayaa ah 3,000 oo shilinka Kenya ah ($ 29.95 US) qalabka, iyo 2,000 ($ 19.97 US) oo dib loogu soo celinayo. Canshuuraha waxay ka dhigayaan kuuskuus aad uga qaalisan sigaar cabista (canshuurta sigaarka waa $ 0.50 halkii xirmo) -waxaaana laga yaabaa inay yihiin canshuuraha vape ee ugu sareeya adduunka
A 1 Kyrgyzstani Som ($ 0.014 US) halkii mililitir cashuurtii e-dareere ay ku jirto nikotiintu
Canshuurta aan caadiga aheyn ee Latvia waxay isticmaashaa labo saldhig si loo xisaabiyo canshuuraha e-dareeraha: waxaa jira tax 0.01 ($ 0.01 US) halkii mililitir cashuur, iyo canshuur dheeri ah (€ 0.005 miligram) culeyska nikotiinka la isticmaalay
A 90 0.90 ($ 1.02 US) canshuurtii mililitir dhammaan e-dareeraha
0.2 Macedonia ah Denar ($ 0.0036 US) halkii mililitir cashuur e-dareere ah. Sharcigu wuxuu ka kooban yahay u oggolaanaya koror otomaatig ah heerka canshuurta 1-da Luulyo ee sannad kasta laga bilaabo 2020 illaa 2023
Canshuurta 10 Filibiin ($ 0.20 US) halkii mililitir 10 (ama jajab 10 mL) canshuurta laga qaado e-dareeraha nikotiinta kujira (oo ay kujiraan badeecooyinka horay loo soo buuxiyay). Si kale haddii loo dhigo, mug kasta oo ka weyn 10 millaar laakiin ka hooseeya 20 millaar (tusaale ahaan, 11 miliil ama 19 mililitir) waxaa lagu qaadaa qiimaha 20 mL, iyo wixii la mid ah
A 0.50 PLN ($ 0.13 US) halkii cashuur mililitir dhammaan e-dareeraha
A 30 0.30 ($ 0.34 US) halkii mililitir cashuurta laga qaado e-dareere ay ku jirto nikotiintu
0,52 Romania Leu ($ 0.12 US) halkii mililitir cashuurta milix-e-nikotiintu ku jirto. Waxaa jira qaab cashuurta loo habeyn karo sanadle iyadoo lagu saleynayo kororka qiimaha macaamiisha
Badeecooyinka la tuuro (sida cigalikes) waxaa lagu canshuuraa 50 rubil ($ 0.81 US) halkii cutub. E-dareeraha nikotiinka ku jira waxaa lagu canshuuraa 13 RUBIL $ 0.21 US) mililitirkiiba
Canshuurtu waa 100% qiimaha canshuurta kahor e-dareere iyo aaladaha. Taasi waxay u dhigantaa 50% qiimaha tafaariiqda.
A 4.32 Diinaar Serbian ah ($ 0.41 US) halkii mililitir cashuurta dhammaan e-dareeraha
A € 0,18 ($ 0.20 US) halkii mililitir cashuurtii e-dareere ay ku jirto nikotiintu
Waddankii ugu horreeyay ee soo roga canshuuraha vape-ga qaranka wuxuu ahaa Jamhuuriyadda Kuuriya (ROK, oo inta badan loogu yeero Kuuriyada Koonfureed Galbeedka) - 2011, isla sannadkaas Minnesota waxay billaabeen inay canshuuraan e-dareere. Waqtigan xaadirka ah wadanku wuxuu leeyahay afar canshuurood oo kaladuwan oo kujira dareeraha elektarooniga ah, midkasta oo loogu talagay ujeedooyin qarash gaar ah (Sanduuqa Dhiirrigelinta Caafimaadka Qaranka waa mid) (Tani waxay la mid tahay Mareykanka, halkaas oo canshuurta sigaarka ee federaalka asal ahaan loogu talagalay in lagu bixiyo Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta). Canshuuraha elektaroonigga ah ee kala duwan ee Kuuriyada Koofureed waxay gaarayaan ilaa 1,799 oo u dhiganta ($ 1.60 US) halkii mililitir, sidoo kale waxaa jira canshuur qashin ah oo ku jirta gulufyada la tuuri karo iyo boodhadhka 24.2 won ($ 0.02 US) halkii kartoon 20.
Canshuur dhan 2 karoon halkii mililitir ($ 0.22 US) canshuurta laga qaado nikotiinta ay ku jirto e-dareere
Imaaraadka Carabta (UAE)
Ganacsiga Caalamiga ah ee ugu horeeya "VIP Pass" ...
Waxaan leenahay “Sir Qarsoodi weyn ...
FEELM wuxuu ka ifayaa Vap-ka ugu Weyn Dunida ...
Liisaska QIIMO BADAN ee Suuqa Sarrifka Hong Kong
Sirta Qarsoon ee Technikada Atomisation FEELM ...
Steven Yang: Hal Talaabo Aniga, Hal Weyn L ...
Sideed Talaabo oo lagula Dagaalamo COVID-19, FEELM waa R ...
FEELM Waxay ku guuleysatay Abaalmarinta Naqshadeynta IF ee 2020 hal-abuur ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Khariidadda bogga - AMP Mobile
Sigaar kuleylka, Epen, Sigaar Cabbida, Newport E Sigaar, E Xidhmada Sigaarka Bacaha, E Sigaarka Uumiga Liibiya,